Inona no atao hoe ota | Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra eran'izao tontolo izao Soisa, Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Malagasy > Mazava ho azy fa ny Baiboly > Inona ny ota?
Ny ota dia ny tsy fanarahan-dalàna, ny fikomiana amin'Andriamanitra. Hatramin'ny fotoana nidiran'ny ota tamin'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'i Adama sy Eva, ny olona dia teo ambanin'ny zon'ny ota - zioga iray izay afaka esorina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany. Ny toetran'ny olombelona manota dia mampiseho ny tenany hametraka ny tena sy ny tombontsoan'ny tenany manokana mihoatra noho Andriamanitra sy ny sitrapony. Ny fahotana dia mitarika amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra sy ny fijaliana ary ny fahafatesana. Satria mpanota daholo ny olona rehetra dia mila ny famonjena natolotry ny Zanany daholo (1 Jaona 3,4: 5,12; Romana 7,24: 25; 7,21: 23-5,19; Marka 21: 6,23-3,23; Galatiana 24; Romana;).
Ny fototry ny fitondran-tena Kristiana dia ny fahatokiana sy ny fitiavana tsy fivadihana amin'ny Mpamonjintsika, izay tia antsika ary nanolotra ny tenany hamonjy antsika. Ny fahatokisana an'i Jesoa Kristy dia aseho amin'ny finoana ny filazantsara sy amin'ny asan'ny fitiavana. Amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia manova ny fon'ny mpino i Kristy ary mamela azy hamoa: fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahatokiana, faharetana, hatsaram-panahy, fahalemem-panahy, fifehezan-tena, fahamarinana sy fahamarinana (1 Jaona 3,23: 24-4,20; 21: 2-5,15; 5,6.22 Korintiana 23:5,9; Galatiana; Efesiana).
Manohitra an ’Andriamanitra ny fahotana.
Ao amin'ny Salamo 51,6: 2, dia nisy David iray nibebaka nilaza tamin'Andriamanitra hoe: "Ianao irery no nanotako sy nanaovako ratsy teo alohanao". Na dia nisy olona hafa niharan-doza tamin'ny fahotan'i Davida aza dia tsy nanohitra azy ireo ny ota ara-panahy - Andriamanitra kosa. Naverin'i David izany hevitra izany ny 12,13 Samoela. Nametraka ny fanontaniana i Joba: "Habakkuk dia nanota aho, inona izao ataoko aminao, ry mpiambina ny olona" (Joba 7,20)?
Mazava ho azy fa rehefa manenjika ny hafa isika dia toa manota azy ireo. Nasongadin'i Paoly fa "tena manohitra an'i Kristy" tokoa isika. (1 Korintiana 8,12) izay Tompontsika sy Andriamanitra.
Misy fiantraikany manan-danja izany
Voalohany, satria i Kristy no fanambaran'Andriamanitra izay itarihan'ny ota, ny fahotana dia tokony hoheverina amin'ny fomba kristiana, izany hoe, amin'ny fomba fijerin'i Jesosy Kristy. Indraindray ny ota dia voafaritra ara-dalàna (amin'ny teny hafa, satria ny Testamenta Taloha dia nosoratana voalohany, tsy maintsy laharam-pahamehana amin'ny famaritana ny ota sy ny fampianarana hafa). Raha ny fahitan'i Kristy anefa no tokony hataon'ny kristiana.
Faharoa, satria manohitra ny zava-drehetra Andriamanitra, ny ota dia tsy afaka manantena ny tsy hiraharaha azy Andriamanitra. Koa satria manohitra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny hatsaram-panahin'Andriamanitra dia manala ny saintsika sy ny fontsika amin'Andriamanitra (Isaia 59,2), izay fiavian'ny fisiantsika. Raha tsy misy ny sorona ataon'i Kristy fampihavanana (Kolosiana 1,19: 21), tsy hanana fanantenana hafa ankoatry ny fahafatesana isika (Romana 6,23). Tian'Andriamanitra hanana fiarahana amam-pitiavana sy fifaliana miaraka ny tsirairay. Manimba io vondrom-piarahamonina sy fifaliana io ny fahotana. Izany no antony halan'Andriamanitra ny ota ka handringana azy. Ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny ota dia ny hatezerana (Efesiana 5,6). Ny fahatezeran'Andriamanitra dia ny fahatapahan-keviny sy mahery vaika handringana ny ota sy aorian'izany. Tsy noho ny mangidy sy ny valifaty toa antsika olombelona, ​​fa noho ny fitiavany ny olona be loatra ka tsy hiandry sy hijery ny fomba handringanana ny tenany sy ny hafa amin'ny alàlan'ny ota izy.
Fahatelo, Andriamanitra irery no afaka mitsara antsika momba io raharaha io, ary Izy irery ihany no afaka mamela heloka satria ny ota irery ihany no manohitra an'Andriamanitra. «Fa aminao, ry Tompo, Andriamanitray, dia misy famindram-po sy famelan-keloka. Satria nivadi-pinoana izahay » (Daniela 9,9). «Satria amin'ny Tompo dia misy fahasoavana sy fanavotana be» (Salamo 130,7). Ireo izay manaiky ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny famelana ny helony "dia tsy natao ho tezitra, fa mba hahazoana famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika". (2 Tesaloniana 5,9).
Andraikitra amin'ny ota
Na dia mahazatra aza ny manome tsiny an'i Satana amin'ny andraikitra amin'ny hoe tonga teto amin'izao tontolo izao ny ota, ny zanak'olombelona dia tompon'andraikitra amin'ny fahotany. "Koa toy ny nidiran'ny ota tamin'izao tontolo izao tamin'ny alalàn'ny olona iray sy ny ota noho ny ota, dia nihatra tamin'ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra" (Romana 5,12).
Na dia nanandrana azy ireo aza i Satana dia nanapa-kevitra i Adama sy i Eva - azy ireo ny andraikitra. Ao amin'ny Salamo 51,1: 4, i David dia manondro fa azo heverina ho mpanota izy satria teraka olombelona. Manaiky ny fahotany sy ny tsy rariny nataony koa izy.
Samy mijaly ny vokatry ny fahotan'ireo izay niaina talohanay hatramin'ny niorenany ny tontolo sy ny tontolo iainantsika. Tsy midika anefa izany fa nandova ny fahotantsika taminy isika ary tompon'andraikitra amin'ny fomba sasany.
Tamin'ny andron'i Ezekiela mpaminany dia nisy adihevitra momba ny fiampangana ny fahotana natao tamin'ny "heloky ny razana". Vakio ny Ezekiela 18 ary diniho tsara ny famaranana ao amin'ny andininy 20: "Izay manota ihany no tokony ho faty". Raha atao teny hafa dia ny tsirairay avy no tompon'andraikitra amin'ny fahotany.
Satria manana andraikitra manokana amin'ny fahotantsika manokana isika sy ny toe-panahintsika, ny fibebahana dia natao manokana. Samy nanota isika rehetra (Romana 3,23:1; 1,8 Jaona) ary ny soratra masina dia mamporisika antsika tsirairay avy hibebaka sy hino ny filazantsara (Marka 1,15:2,38; Asan’ny Apostoly).
Manao fanaintainana lehibe i Paoly mba hanondroana fa toy ny nidiran'ny ota tamin'ny tontolo iray tamin'ny alalàn'ny olona iray, ny famonjena dia tsy misy afa-tsy amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy. "... Satria raha maro no maty noho ny fahotan'ilay olona, ​​mainka moa ny fahasoavan'Andriamanitra nomena ny maro amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy lehilahy iray" (Romana 5,15, jereo koa ny andininy 17-19). Ny fahalasan'ny ota dia antsika, fa ny fahasoavan'ny famonjena dia i Kristy.
Ny fandinihana ny teny nampiasaina hilazana ny ota
Misy teny hebreo sy grika isan-karazany ampiasaina amin'ny famaritana ny ota, ary ny teny tsirairay dia manampy singa mifameno amin'ny famaritana ny ota. Ny fandalinana lalina ireo teny ireo dia azo alaina amin'ny alàlan'ny encyclopedia, ny hevitrao ary ireo fitaovana fianarana Baiboly. Ny ankamaroan'ireo teny ampiasaina dia misy fihetsika ao am-po sy saina.
Amin'ireo teny hebreo be mpampiasa indrindra, ny fiheverana ny ota dia toa tsy misy tanjona (Genesisy 1: 20,9; Eksodosy 2:32,21; Ek 2 Mpanjaka 17,21:40,5; Salamo, sns); Ny ota dia misy ifandraisany amin'ny fiatoana eo amin'ny fifandraisana, noho izany fikomiana (Famadihana, fikomiana araka ny voafaritry ny 1 Samoela 24,11:1,28; Isaia 42,24;, sns); mamadika ny zavatra miolikolika, noho izany ny fanodikodinana zavatra tsy mety amin'ny tanjona nokendrena (asa ratsy toy ny ao amin'ny 2 Samoela 24,17:9,5; Daniela 106,6; Salamo, sns); noho ny fahadisoana ary noho izany meloka (Tezitra eo amin'ny Salamo 38,4; Isaia 1,4; Jeremia 2,22); ny mania sy miala amin'ny làlana iray (jereo adala ao amin'ny Joba 6,24:28,7; Isaia, sns); Manota ny hafa (Faharatsiana sy fanararaotana ao amin'ny Deoteronomia 5; Ohabolana 26,6. Sns.)
Ny teny grika nampiasaina tamin'ny Testamenta Vaovao dia teny mifandraika amin'ny tsy misy tanjona (Jaona 8,46:1; 15,56 Korintiana 3,13:1,5; Heb. 1:1,7; Jak.; Jaona, sns.); misy lesoka na lesoka (Ny fifindra-monina ao amin'ny Efesiana 2,1; Kolosiana 2,13 sns); miaraka amin'ny sisintany sisintany (Ny fifindra-monina ao amin'ny Romana 4,15:2,2; Hebreo sns); amin'ny zavatra atao amin'Andriamanitra (olona tsy tia an'Andriamanitra ao amin'ny Romana 1,18:2,12; Titosy 15; Jodasy, sns); ary amin'ny tsy fanarahan-dalàna (Ny tsy fahamarinana sy ny fandikan-dalàna ao amin'ny Matio 7,23:24,12; 2:6,14; 1 Korintiana 3,4; Jaona, sns.).
Ny Testamenta Vaovao dia manampy ny refy hafa. Ny ota dia ny tsy fahombiazana maka fotoana iray hampihatra ny fitondran-tena amin'ny hafa (Jakoba 4,17). Ambonin'izany, "izay tsy avy amin'ny finoana dia ota" (Romana 14,23)
Ny ota amin'ny fomba fijerin'i Jesosy
Manampy ny fandalinana ny teny saingy tsy mitarika antsika hanana fahalalana feno momba ny ota fotsiny. Tahaka ny efa nolazaina tany aloha, dia tsy maintsy mijery ny ota amin'ny fomba fijery Kristiana isika, izany hoe, amin'ny fomba fijerin'ny Zanak'Andriamanitra. Jesosy no sary marina ao am-pon'ny Ray (Hebreo 1,3) ary niteny tamin-draza antsika ny rainy: "Tokony hihaino azy ianao!" (Matio 17,5).
Nanazava ny fandinihana faha-3 sy faha-4 fa Jesosy dia tonga Andriamanitra ary ny teniny dia tenin'ny fiainana. Ny tiany holazaina dia tsy vitan'ny hoe taratry ny sain-dray ihany fa mitondra miaraka aminy ny fahefana ara-moraly sy ny fitondran-tena koa.
Tsy zavatra atao amin'Andriamanitra fotsiny ny ota - fa mihoatra izany. Nohazavain'i Jesosy fa avy amin'ny fon'ny olombelona mpanota sy ny sainy ny ota. «Satria avy ao anaty, avy am-po, dia tonga ny eritreritra ratsy, ny fijangajangana, ny halatra, ny famonoana, ny fanitsakitsaham-bady, ny fitsiriritana, ny lolom-po, ny fitaka, ny fanararaotana, ny lolompo, ny fitenenan-dratsy, ny avonavona, ny tsy firaharahiana. Ireo zavatra ratsy rehetra ireo dia avy ao anaty ary mahatonga ny olona ho voaloto » (Marka 7,21-23).
Manao hadisoana isika raha mitady lisitra manokana sy tsy miovaova. Tsy ny fihetsiky ny tsirairay fotsiny no jerena, fa ny fihetsika manery ao am-po izay tokony ho fantatsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Na izany aza, ny andalana etsy ambony avy amin'ny Filazantsaran'i Marka dia iray amin'ireo maro izay nataon'i lisitr'i Jesosy sy ny apostoliny na mampitaha ny fanao mpanota ary ny fanehoana ny finoana. Mahita andinin-teny toy izany ao amin'ny Matio 5-7; Matio 25,31: 46-1; 13,4 Korintiana 8: 5,19-26; Galatiana 3; Kolosiana sns Jesosy dia mamaritra ny fahotana ho fihetsika manandevo ary milaza hoe: "Izay manota dia andevon'ny ota" (Jaona 10,34).
Ny fahotana dia mamindra ny fitondran-tenan'ny olona hafa. Izy io dia mihetsika toy ny tsy tompon'andraikitra amin'ny fahefana avo kokoa izay avo noho ny tenantsika. Ho an'ny kristiana dia ny ota dia tsy mamela an'i Jesosy ho tia ny hafa amin'ny alalantsika, ka tsy manaja ny antsoin'i Jakoba hoe "fanompoana madio sy tsy misy fotony" (Jakoba 1,27) sy ny "lalàna momba ny mpanjaka araka ny Soratra Masina" (Jakoba 2,8). Nanazava i Jesosy fa ireo izay tia azy dia hanaraka ny teniny (Jaona 14,15:7,24; Matio) ary hanatanteraka ny lalàn'i Kristy.
Ny lohahevitry ny ota ananantsika dia mitaky amin'ny Soratra Masina rehetra (jereo koa Genesisy 1; 6,5; Mpitoriteny 8,21; Jeremia 9,3; Romana 17,9:1,21, sns). Noho izany dia mandidy antsika Andriamanitra: «Esory ny fandikan-dalàna rehetra nataonao, ary manaova fo vaovao sy fanahy vaovao» (Ezekiela 18,31).
Amin'ny fandefasana ny Zanany ao am-pontsika dia mahazo fo vaovao sy fanahy vaovao isika, ary manaiky fa avy amin'Andriamanitra isika (Galatiana 4,6; Romana 7,6). Koa satria an'Andriamanitra isika, dia tsy tokony ho "andevon'ny ota" intsony. (Romana 6,6), tsy «tsy mahatakatra intsony, tsy mankatò, tsy mania, tsy manompo faniriana sy faniriana intsony, tsy miaina ao anatin'ny faharatsiana sy fialonana, tsy halan'ny olona ary hifankahala» (Titosy 3,3).
Afaka manampy antsika ny toe-javatra misy ny ota nentin-drazana voalohany ao amin'ny Genesisy. Adama sy Eva dia niaraka tamin'ny Ray ary ny ota dia nitranga rehefa namakivaky izany fifandraisana izany izy ireo tamin'ny fijerena feo hafa (Vakio ny Genesisy 1-2).
Ny tanjon'ny ota tsy hita dia ny fandresena ny fiantsoantsika any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy (Filipiana 3,14) ary amin'ny alàlan'ny fananganan'anaka amin'ny fiarahamonina Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia azo antsoina hoe zanak'Andriamanitra (1 Jaona 3,1). Raha miala amin'ity vondrom-piarahamonina ity miaraka amin'Andriamanitra izahay, tsy ho diso ny tanjona.
Miaina ao am-pontsika i Jesoa ka afaka "feno ny fahafenoan'Andriamanitra" (jereo Efesiana 3,17: 19), ary ny fanapahana ity fifandraisana fenoina ity dia fahotana. Rehefa manota isika dia mikomy amin'ny fisiany Andriamanitra. Manimba ny fifandraisana masina izay nokasain'i Jesosy tamintsika talohan'ny nanorenan'izao tontolo izao. Ny fandavana ny famelana ny Fanahy Masina hiasa ao anatintsika hanao ny sitrapon'ny Ray. Tonga Jesosy hiantso ny mpanota hibebaka (Lioka 5,32), izay midika fa miverina mifandray amin'Andriamanitra sy ny sitrapony ho an'ny olombelona izy ireo.
Ny fahotana dia midika hoe maka zavatra mahatalanjona noforonin'Andriamanitra tamin'ny fahamasinanany ary hamadika izany amin'ny hafa noho ny faniriana fitiavan-tena. Midika izany fa miala amin'ny tanjona nokendren'Andriamanitra ho an'ny olombelona mba hampidirana ny olona rehetra amin'ny fiainany.
Ny ota koa dia midika tsy fametrahana ny finoantsika an'i Jesosy ho mpitari-dalana sy fahefana amin'ny fiainantsika ara-panahy. Ny ota izay ara-panahy dia tsy voafaritry ny lojika na ny fihevitr'olombelona fa Andriamanitra. Raha mila famaritana fohy isika dia afaka milaza fa ny ota no fanjakan'ny fiainana raha tsy misy firaisana amin'i Kristy.
Ny Kristiana dia tokony hisoroka ny ota satria tapaka ny ota amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izay manala antsika amin'ny firindran'ny fifandraisana amin'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.